Led Corn Light - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Corn Light)
Bbier 40W Led Corn Bulb dị ka bọmbụ 120W, 4800 lumen na-egbuke egbuke, ị na-echekwa ruo pasent 80 nke ọkụ eletrik na-akwụ ụgwọ iji tụnyere ìhè ọkụ. Nke a 40W Led Corn A na-eme ka ọkụ dị ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ iji hụ na ikpo ọkụ na nkwụsị dị mma na-eguzogide corrosion. N'ihe ruru ogo E40 isi, E40 Led Corn Light dị mma...
60W Ruo na 175W Metal Halide Replacement
Bbier 60 Watts Metal Halide Dide Replacement E nwere ìhè dị ka 7,800 Lumens na nke a Metal Halide ruo na 30w nwere ike dochie anya 175 watt HPS / HID / HALIDE light.4000K agba aja na-eme ka a hụ ìhè ọkụ. Okpukpo uzo ogugu nke uzo nke 175W anyi bu ndi ozo. Jikọtara ozugbo na E39 Mogul Bases ma gụọ ya na. Ogwe ọkụ a...
Zọpụta ego: Bbier Led Corn Light Bulbs na-ebelata ike na-efu ihe karịrị 90% site na dochie bọmbụ gị na-ejikọta ya na Led Corn Cob Lamp . Ogologo oge ndụ 50000H: Ndụ ndụ dị ogologo nke a na - eme ka bulb bulb e27 .Ọtụtụ awa na - arụ ọrụ ruo ihe karịrị afọ 20. AKỤKỌ NDỊ AHỤRỤ ỤLỌ ỊDỤ: Eji ya rụọ ọrụ na oyi na-atụ na-arụ...
Nke a Dimmable Led Corn Light emepụta 24000 Lumens iji naanị 200 Watts. Ngwá ọrụ ike dị mma nke na-eme ka ihe ọkụkụ na-esi ísì ụtọ na oriọna ndị na-esi ísì ụtọ, ihe ndị a dị elu Mogul Base Led Corn Light dị na mbara igwe dị iche iche. Na-ekpo ọkụ nke ọma 2700 Kelvin kwekọrọ na Led Corn Light E26 mmepụta nke MH oriọna...
IP65 ETL 50 Watt Led Corn Light lamp
Anyị 50 Watt Led Corn Lamp nwere ike dochie ihe odide 175W. Nke a 12 Volt Led Corn Light nwere elu 7000 Lumens na ìhè nke na-egbuke egbuke ma na-edo edo. Led Corn Light dị mfe iji wụnye ma rụọ ọrụ ma kpoo ọka ọka na-eduzi anyị dị mma maka ime ụlọ na n'èzí. Nke a mere ka ọkụ ọkụ ọkụ maka ire ere dabara ntọala E26 ọ...
Ọdụm 80 W Led dị mma maka ngwa ndị chọrọ ka ìhè oriọna na-enwu gbaa dịka HID ma ọ bụ elu wattage CFL na ọkụ ọkụ. Dị ka ihe nchekwa ike na-echekwa iji bulbs light bulbs, 80W Led Corn Light bụ ngbanwe zuru oke maka ọkụ / ụlọ ahịa ọkụ, n'èzí na-agbanye ọkụ na ọkụ mgbidi. E40 80 L Leta Ọkụ dochie oriọna 277-Volt nke...
MGBE Ị GA-EME: Ịchebe 85% na ego gị! Bbier 80W Ọkụ ọka na- enye ezigbo ngbanwe nke 250w na-enye gị ohere site na ntanye ọkụ 80 watt. MGBE A GA-EKWU NDỊ: 80 Watt Led Corn Light nke a pyramid zuru okè maka iji ya mee ihe na mgbochi ndị nwere ike ịkwado ya, nnukwu ihe ndị na-eme ka mmiri dị elu na ndị dị elu. Led Corn...
Led Corn Light Dlc Led Corn Light Led Corn Light 100w Led Corn Light Bulbs Led Corn Light Canada Led Road Light Led Cornlight 30W 80W Led Corn Bulb Light